किशोरी ग’र्भवती हुँदा सामुहिक ब-ला-त्का-र भएको खुलासा भएपछी यस्तो सम्म भयो ! – Life Nepali
किशोरी ग’र्भवती हुँदा सामुहिक ब-ला-त्का-र भएको खुलासा भएपछी यस्तो सम्म भयो !
२४ असार, विराटनगर । मोरङमा प्रहरीले सामूहिक ब’ला’त्कार’मा सं’लग्नको आ’रोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले चार महिनाअघि १७ वर्षकी किशोरीमाथि भएको सामूहिक ब’ला’त्का’रमा सं’लग्न भएको आ’रोपमा उर्लाबारी नगरपालिका– ५ का ३० वर्षका प्रदीप खतिवडा र २१ वर्षका भेषराज आचार्यलाई प’क्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार २७ फगुनमा दिउँसो करिब ३ बजे किशोरी घरमा एक्लै भएको अवस्थामा छिमेकी दुई युवकले ब’ला’त्का’र गरेका हुन् ।
ग’र्भवती भएपछि खुल्यो ब’ला’त्का’र
मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईका अनुसार किशोरी ग’र्भवती भएपछि घ’टना बाहिर आएको हो । किशोरीलाई घट’ना कसैलाई सुनाए मा’र्ने ध’म्की दिएका कारण करिब चार महिना घ’टना बाहिर आएको थिएन । तर किशारी ग’र्भवती रहेको खुलेपछि आफन्त सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा उ’जुरी दिन गएका थिए ।
चार महिनापछि जाहेरी आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले सोही दिन दुई युवकलाई प’क्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रो’तका अनुसार पी’डित पक्षलाई सुरुमा प्रहरीमा उ’जुरी गर्न दिइएको थिएन । घ’टना गाउँमै मिलाउने प्रयास भए पनि ग’र्भ रहेको पुष्टि भएपछि पी’डित परिवारले प्रहरीमा जा’हेरी दिएको थियो ।
Previous श्रीमान कतारमा श्रीमती १३ बर्षको छोरी छा’डेर अ’र्कै सँग फ’रार !
Next एका बिहानै आयो दुखद खबर : सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा वर्षासँगै आएको भि’षण बाढीले १५ घर ब’गायो,१८ जना बे’पत्ता”